Ungasisebenzisa Kanjani Icebo Lokumaketha Eliphumelelayo | Martech Zone
ULwesithathu, May 6, 2015 ULwesibili, May 5, 2015 UMichael Shearer
Usebenzisa kanjani isu eliphumelelayo lokumaketha? Kumabhizinisi amaningi, lona ngumbuzo wedola wesigidi (noma ngaphezulu). Futhi ngumbuzo omuhle kakhulu okufanele ubuzwe. Kodwa-ke, okokuqala kufanele ubuze, yini ehlukanisa njenge- isu lokumaketha eliphumelelayo?
Liyini isu Lokuphumelela Lokumaketha?
Kuqala nge- umgomo noma isethi yezinhloso. Kunezinhloso ezimbalwa ezisemqoka ezikusiza ukuthi ulinganise ngokucacile ukusetshenziswa okuphumelelayo kokuzenzakalela kokumaketha. Kubandakanya:
Impumelelo Yezindlela Zokumaketha Umphumela ku Khulisa e:
Kuyafaneleka ukuhola isizukulwane
Impumelelo Yezindlela Zokukhangisa Eziphumelelayo ku Nciphisa e:
Amathuba okuthengisa alahlekile
Noma ucabanga lolu hlu olubanzi lwezinhloso ongazifeza, ukusebenzisa isu eliyimpumelelo lokumaketha akuqinisekisiwe.
Ukuchaza Isu Lakho Lokuzenzakalela Lokumaketha
Ngicabange ngezimo ezingama-20 + zokuzenzakalela kokumaketha engikusizile ukuhambisa nokuthi yini abaphumelele kakhulu abaye bafana ngayo. Ngithole ukufana okubili okuzwakalayo kuwo wonke amasu wokuthengisa wokuzenzela aphumelele engibe yingxenye yawo: ukuphathwa kokuhola okusebenzayo nemitapo yolwazi eqinile.
Ukuphathwa kokuhola okuphumelelayo kuyinto ebanzi kunayo yonke yezentengiso ezishintshayo ngakho-ke ngizoyidiliza ezindaweni ezibalulekile zokuphathwa okuholayo ezizosiza noma yiliphi ibhizinisi ukuthi lithole impumelelo ekusebenziseni ukuzenzakalela kwezentengiso. Ukuqala, ukuthengisa nokumaketha kudingeka kuhlangane kuchaze ukuhola. Okungcono futhi, chaza ukuhola phakathi kweqoqo lamaphrofayela noma ama-personas. Yimaphi amanani abalulekile we-demographic / firmographic akha ukuhola?
Ukusungula izigaba zakho zokuhola okulandelayo. Lokhu kungaba lula njengezigaba zokuhola zendabuko njenge-MQL, SAL, SQL, njll. Noma, inkampani ingakha izincazelo zesiteji sokuhola ngokwezifiso ezikhomba ngokunembile izinyathelo ezihlukile kunqubo yokuthenga kwamakhasimende abo.
Ngemuva, hola izincazelo nezigaba, ufuna ukumaka okuqukethwe okukhona esigabeni ngasinye sokuhola. Lokhu kuzokusiza wenze ukukhulisa kokuhola ngokuya ngesigaba samanje sokuhola. Yilapho umtapo wolwazi wokuqukethwe oqinile uqala khona ukusebenza. Ngokuba nokuqukethwe okuhle ongabelana ngakho kuzo zonke izingxenye zomsele wokuthengisa, ukuzenzakalela kokumaketha kunenhloso. Ngaphandle komtapo wolwazi omuhle, ngeke ube nokuncane ukusho noma ukwaba nganoma yiliphi inani.
Ukwakha Uhlelo Lwakho Lokuhola Oluhola
Ukubuyela ekukhuliseni okuhola phambili, ukuveza nokudala izinhlelo zokuhola phambili kuyisinyathelo esibucayi ekufakweni ngempumelelo kwemishini yokuthengisa. Izinyathelo zokuchaza isigaba sokuhola / sokuhola zidlala indima ebalulekile yingakho ngikhulume ngazo, kepha izinhlelo zakho zokuhola ezokondla zizokwenza noma zonakalise ukutshalwa kwezimali kwakho okuzenzakalelayo.
Ngezinhlelo zokuhola phambili, kunconywa kakhulu ukuthi wakhe uhlelo lokugeleza lwezinhlelo zakho zokuhola ukusiza ukusiza ukwakha izindlela zokondla, uchaze izimbangela ezidingekayo, ukhombe izikhala zokuqukethwe uphinde uqondise imisebenzi yokuthengisa neyokumaketha. Ngokwenza nokubuyekeza le flowchart nababambiqhaza (isb. Amaqembu okuthengisa nawokumaketha), ungahlangana emikhankasweni esebenzayo, uxazulule izingxabano ezingaba khona futhi unikeze izibopho kuyo yonke inqubo yomkhankaso njengoba kudingeka.
Ukuze unakekele ngempumelelo imikhondo, noma kunjalo, udinga ukwazi ukuletha okuqukethwe okufanele ngesikhathi esifanele. Ukuba nelabhulali yokuqukethwe eqinile nokuyimaka ukuze uhole izigaba akwanele. Ukwenza ukuthi ukuzenzekelayo kwakho kokumaketha kubangele ukulethwa kokuqukethwe okufanele kuncike ekwakheni imithetho yebhizinisi ehlakaniphile ecisha ngokuzenzakalela okuqukethwe okuhlobene nemisebenzi ethile yomholi.
Lapho ujula khona ungalandela umsebenzi wokuhola futhi wakhe imikhankaso yokunakekelwa kokuhola ephendula ngokulandelana kusethi yomsebenzi, + uzophumelela ngokwengeziwe ngemishini ezisebenzisayo. Ukukhuliswa kokuhola okugxile ngokubanzi kuzoba nembuyiselo encane (uma ikhona). Ukukhuliswa kokuhola okubhekiswe kakhulu kusetshenziswa ukwahlukaniswa kwedatha okuthuthukile nokuqukethwe okubalulekile, okufanelekile kuzokwenzela okuhlangenwe nakho kwakho okuhle futhi ekugcineni kukusize ufinyelele imigomo yezinjongo zokumaketha ozichaze ekuqaleni.
Ukuhlukanisa Ukuhola Kwakho Kokumaketha
With I-Net-Results Marketing Automation, siyaziqhenya ngokuba nesigaba semininingwane esezingeni eliphakeme kakhulu futhi sihola amathuluzi okukhulisa ebhizinisini. Ukuletha imiyalezo ebhekiswe kakhulu ngokuqukethwe okuhambisanayo yindinganiso entsha yayo yonke imikhankaso yezentengiso futhi sikwenze kwaba lula lokho kubakhangisi ukuthi bakwenze ngeNet-Results. Ukusebenza kwethu kwehlukaniso kungumongo we-Net-Results futhi kusiza ukuhola izinhlelo zakho zokukhulisa eziholayo phakathi kweminye imisebenzi ebalulekile yokumaketha ezenzekelayo njengokufaka amagoli okuhola, izexwayiso ezisheshayo, ukubika nokuningi.
Ungakha imithetho ehlukanisayo ejulile yokwethula noma yimuphi umkhankaso wokukhulisa futhi igatsha ngalinye emkhankasweni linikwa amandla ngenjini efanayo yokuhlukanisa, okuvumela amakhulu ezinhlanganisela zezingxenye ukuba zihambise imikhondo ngokukhalipha nangokulula ngenqubo yokufunda nokuthenga.
Tags: ukunciphisa ukuthengisa okulahlekileyehlisa ukumaketha ngaphezulunciphisa umjikelezo wokuthengisaphaka ukuzisebenzisela ukumakethaukwandisa imaliukuhola ukukhulisahola isu lokukhulisaukuzenzekelayo kokuzenzekelayoukuhlukaniswa kwemishini ezishintshayoisu lokuthengisa ezenzakalelayoimikhondo efanelekayoamathuba okuthengisaumkhiqizo wokuthengisa
UMichael unguMqondisi Wezokukhangisa we Imiphumela yeNet. UMichael uyi-Marketing Technologist yezobuciko, enamasu amasha futhi emisha ezuza impumelelo ngokubona amaphethini, ukwenza izixazululo zokudala nokusebenzisa ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kakhulu ukwakha ukwazisa ngomkhiqizo ukusekela izinhloso zokumaketha nokuthengisa.
Sep 4, 2015 ku-7: 56 AM
Thanda ukuthi usho ukushintsha kwamashadi ku-athikili yakho uMichael! Lezi zinto zingaba nzima futhi ngikuthole kubaluleke kakhulu. Ikakhulukazi uma usebenzisa ithuluzi elifana neHubspot lapho kungenakho ukumelwa kofanele owakhayo.
Sep 29, 2015 ngo-12: 13 PM
"Ngokujula ungakwazi ukulandela umkhondo womsebenzi futhi udale imikhankaso yokunakekela abahola phambili ephendula ngokulandelana kumasethi womsebenzi, + uzophumelela ngokwengeziwe ngemishini ezisebenzisayo." Ukuthande lokhu futhi awukwazanga ukuvuma okuningi.
UMike onelukuluku lokuzwa ukuthi uwuchaza kanjani futhi uwusebenzise kanjani “Umsebenzi Wokuhola” kanye “Namasethi Womsebenzi” ukuthuthukisa imikhankaso eningi yokukhulisa?
Jan 21, 2018 ngo-11: 34 PM
Isihloko esihle Michael! Ukusetha isu elihle lokuzenzekelayo lokumaketha kuyisisekelo sempumelelo eminyakeni ezayo
UJun 20, 2021 ngo-6: 04 AM
Le ndatshana ivula iso ekuthengisweni kwecebo lokuzenzekelayo.